Votoatin'ny vavahady na tsy misy vavahady: Rahoviana? Fa maninona Ahoana ... | Martech Zone
Ny fanatonana ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ireo fitondran-tenany nomerika dia mora azo amin'ny alàlan'ny dokambarotra lasibatra sy media. Ny fahazoana ny marikao ho lohalaharana ao an-tsain'ny mpividy anao, manampy azy ireo hahafantatra bebe kokoa ny marikao ary manantena ny hiditra azy ireo amin'ny dian'ny mpividy fanta-daza dia sarotra kokoa. Ny atiny dia mifanaraka amin'ny filan'izy ireo sy ny zavatra mahaliana azy ireo, ary atolotra azy ireo amin'ny fotoana mety indrindra handrehitra an'io dingana io.
Na izany aza, ny fanontaniana manontany izay tokony hapetraka dia ny tokony "hanafenanao" ny sasany amin'ireo atiny tsy ho an'ny mpihaino anao ve ianao?
Miankina amin'ny tanjon'ny orinasao, ny fanafenana na ny "gating" ny sasany amin'ny atiny dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny famolavolana mpitarika, fanangonana data, fizarana, marketing amin'ny mailaka, ary ny famoronana fahatsapana lanja na fitarihana eritreritra miaraka amin'ny atiny.
Fa maninona no atiny vavahady?
Ny votoatin'ny gating dia mety ho tetika tena sarobidy tokoa rehefa mikasa ny hanao fanentanana hikolokoloana sy hanangona vaovao momba ny mpihaino kendrenao. Ny olana mitranga rehefa mihinana atiny be loatra ianao dia ny fanilihanao ny mety ho mpihaino, ny mpampiasa karoka indrindra. Raha azo idirana ampahibemaso ao amin'ny tranonkalanao ny atiny — fa ny vavahady dia afaka manakana ny mpijery tsy hahita na hahita azy io vavahady io. Ny paikadin'ny gating atiny dia mamporisika ny mpampiasa hanome vaovao momba azy ireo amin'ny endrika iray handraisana ny karama.
Ny loza ateraky ny atiny amin'ny gating dia tsotra ihany koa: ny fitazonana ireo atiny tsy mety dia mety hampihemotra ny mpihaino anao tsy hiditra amin'ny marika intsony.
Fandinihana ny atiny momba ny vavahady / Tsy ny vavahady?
Ny fomba famakafakana izay atiny tsara apetraka amin'ny vavahady fa tsy vavahady dia azo sarahina amina sokajy telo:
Dingana fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa
Search Volume Query
Be lasibatra, votoaty tsara
Fanontaniana ho an'ny dingana fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa:
Inona no dingana amin'ny dian'ny mpanjifa?
Izy ireo ve no ambony indrindra amin'ny fantsona ary mianatra momba ny orinasanao fotsiny?
Fantatr'izy ireo ve ny marikao?
Ny atiny mifatotra dia mandaitra kokoa amin'ny fikolokoloana sy fanangonana angon-drakitra rehefa eo anelanelan'ny fiheverana sy ny fividianana ny mpanjifa satria vonona hanome bebe kokoa ny mombamomba azy ireo izy ireo handraisana atiny sarobidy. Amin'ny famoronana an'io "effet savite velvet" an'ny exclusivity io dia azo inoana fa hanome vaovao bebe kokoa ho an'ny atiny "premium" ny mpampiasa, fa raha mifatotra ny atiny rehetra dia very ny vokany kendrena.
Sarobidy kokoa ihany koa ny fametrahana atiny manokana momba ny fifantohana sy ny atiny ho an'ny orinasanao satria afaka mikendry ny mpihaino azy ireo tsara kokoa ianao ary mitazona ny mpihaino hirotsaka hatrany.
Fanontaniana momba ny volan'ny fangatahana fikarohana:
Inona ireo teny fikarohana lehibe ampiasaina amin'ity atiny ity?
Mikaroka ireo teny ireo ve ny olona?
Tianay ve ny olona mitady ireo voambolana ireo hahita ny atiny na tsia?
Mpampiasa nokasaina ve ny mpihaino?
Ireo mpikaroka ao anaty atiny dia mivoaka avy amin'ny atiny sarobidy, ka raha tsy mino ianao fa hahita zava-dehibe amin'ny atiny ny mpihaino biolojika, ny fanesorana azy amin'ny fikarohana (gating it) dia tena hanao izany. Ny fanamby lehibe indrindra amin'ny famaliana ireo fanontaniana ireo dia ny famaritana raha tsy mahatratra ny fivezivezena fikarohana organika sarobidy ianao amin'ny alàlan'ny valin'ny atiny. Mampiasà Google Webmaster Tools hahalalana raha ny mpihaino izay mitady ny anao teny fototra ao anaty ny atiny dia ampy lehibe. Raha mpampiasa anao ireo mpikaroka ireo dia eritrereto ny avelanao ho voaroaka ny atiny.
Fanampin'izany, amin'ny alàlan'ny fanamarihana votoaty mifanohitra amin'ny sehatra misy azy eo amin'ny dian'ny mpanjifa dia mamela ny tenanao ianao hanangana fantsom-panafody namboarina. Ohatra, ny atiny fampahafantarana (top-of-the-funnel) dia mety ho lasa ankapobeny sy miatrika ny besinimaro raha toa ka midina lavitra ny fantsom-pandehanan'ny mpampiasa, vao mainka sarobidy ho azy ireo ny atiny. Tahaka ny zava-tsarobidy rehetra, ny olona dia vonona ny "hanome / handoa" izany.
Fanontaniana momba ny atiny lasibatra loatra:
Moa ve mifantoka manokana amin'ny programa, indostria, vokatra, mpihaino sns ... ity atiny ity?
Wmety ho hitan'ny besinimaro fa manintona na misy ifandraisany ity atiny ity?
Ampy ve sa tsy mazava ny atiny?
Ankoatry ny fandefasana an-tsarintany atiny amin'ny dian'ny mpanjifa sy ny fahazoana ny sanda fikarohana voajanahary ny atiny, dia eo ihany koa ny fandinihana ny olana voavaha amin'ny atiny. Ny atiny tena voafaritra manokana izay miatrika ny filàna marina, ny faniriana, ny fangirifiriana, ny sokajy fikarohana, sns. Dia manatsara ny fahafahan'ny mpanatrika milaza ny mombamomba azy ireo. Io fampahalalana io dia azo ampiasaina hanaparitahana ireo mpitsidika, personas ary mitovy ny mombamomba azy ireo amin'ny fampielezan-kevitra mety hitrandrahana amin'ny resaka marketing amin'ny fantsona maro hafa toy ny mailaka, automatisation marketing / fitarihana firaka, na fizarana ara-tsosialy.
Farany, ny gating vs. tsy ny votoatin'ny gating dia azo alefa araka ny tokony ho izy amin'ny fomba fitadiavana cornel. Ny tolo-kevitra iraisana dia ny hametahana an-tsoratra ny atiny araka ny tokony ho izy sy ny firesahana ireo sombin-javatra izay homena tombony ho "premium" na tsia.
Amin'ny fotoana isian'ny mpampiasa dizitaly tototry ny atiny misy ifandraisany indrindra amin'izy ireo, zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba hikolokoloana azy ireo amin'ny alàlan'ny fifangaroana stratejika ny atiny mifatotra sy tsy voahidy. Ny fitsangatsanganana ny fihetsik'izy ireo dia lakilen'io fifandraisana voalohany io, fa ny atiny mety, amin'ny fotoana mety, ho an'ny "vidiny" mety ho an'ny mpampiasa no hitazomana azy ireo hiverina.
Tags: dia atinyMpanjanantanydingana dian'ny mpanjifaatin'ny vavahadygating atinyHyper-lasibatrahaben'ny fangatahana fikarohanaatiny kendrena
Raha nanao izany fotsiny ny ekipan'ny atiny dia handresy ianao